နျူကလီးယားလက်နက် စွန့်လွှတ်ရေး လက်တွေ့ စတင်လုပ်ဆောင်မှသာ မြောက်ကိုရီးယားကို သက်သာခွင့် ပေး - Yangon Media Group
နျူကလီးယားလက်နက် စွန့်လွှတ်ရေး လက်တွေ့ စတင်လုပ်ဆောင်မှသာ မြောက်ကိုရီးယားကို သက်သာခွင့် ပေး
စင်ကာပူ၊ ဇွန် ၃
နျူကလီးယားလက်နက်စွန့်လွှတ်ရေး အမှန်တကယ်လက်တွေ့ စတင်လုပ်ဆောင်မှသာ မြောက်ကို ရီးယားအပေါ် ချမှတ်ထားသော အရေးယူပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှုဆန်ရှင်များ ရုပ်သိမ်းပေးမည်ဟု အမေရိ ကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး ဂျင်မက်တစ်က ဇွန် ၃ ရက်တွင် ပြောသည်။ ရှန်ဂရီလာဆွေးနွေးပွဲတက် ရောက်ရန် စင်ကာပူသို့ရောက်ရှိ နေသော ဂျင်မက်တစ်သည် တောင်ကိုရီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နှင့် ဆွေးနွေးပွဲမကျင်းပမီတွင် ထိုသို့ ပြောကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
”ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေက ကြမ်းတမ်းတဲ့ခရီးရှည်ဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ မြောက်ကိုရီးယားအပေါ် ချမှတ်ထားတဲ့ ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံ ရေးကောင်စီဆန်ရှင်တွေကို ကျွန် တော်တို့ဆက်လက်ကျင့်သုံးသွားမှာပါ။ နျူကလီးယားလက်နက်စွန့် လွှတ်ရေးအတွက် စစ်မှန်ပြီးနောက် ပြန်မဆုတ်နိုင်တဲ့ အဆင့်တွေလုပ် ပြမှာသာ မြောက်ကိုရီးယားအနေနဲ့ သက်သာခွင့်ရရှိမှာပါ”ဟု ဂျင်မက်တစ်ကပြောသည်။
ပထမဆုံးနျူကလီးယားဗုံး စမ်းသပ်ဖောက်ခွဲသည့် ၂ဝ၁၆ ခု နှစ်မှစ၍ မြောက်ကိုရီးယားသည် နျူကလီးယားနှင့် ပဲ့ထိန်းဒုံးကျည် အစီအစဉ်များကြောင့် စီးပွားရေးအရ ပိတ်ဆို့အရေးယူဒဏ်ခတ်မှု ဆန်ရှင်များ ချမှတ်ခံထားရသည်။ နျူကလီးယားလက်နက်စွန့်လွှတ်ပါက ဆန်ရှင်များရုပ်သိမ်းပေးမည်ဟု အမေရိကန်ကကမ်းလှမ်းထားသည်။ မြောက်ကိုရီးယားခေါင်း ဆောင်ကင်ဂျုံအန်ကမူ ၎င်း၏ အာဏာဆက်လက်တည်မြဲရေးအတွက်ပါအမေရိကန်ထံမှအာမခံချက်ရ ရှိလိုနေသည်ဟု ယူဆရသည်။ အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ် ထရန့်သည် ကင်ဂျုံအန်နှင့် ဇွန် ၁၂ ရက်တွင် စင်ကာပူ၌တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမည်ဟု ဇွန် ၁ ရက်တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ ကင်ဂျုံအန်ထံမှ စာတစ်စောင်လက်ခံရရှိအပြီးတွင် ထိုသို့ကြေညာလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
စင်ကာပူနှင့် မလေးရှား ကာကွယ်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် သီးသန့်ဆွေးနွေး
ကျောင်းဆောင်အပ်ပြီး လေးလအကြာတွင် ပျက်စီးခဲ့သော မူလတန်းလွန်ကျောင်း စာသင်ဆောင်အား စစ်ကိုင်?
နိုင်ငံဧရိယာ၏ ငါးရာခိုင်နှုန်းတွင် ကြားဖြတ်သန်းခေါင်စာရင်းကောက်မည်
အောင်လံမြို့နယ် အတွင်းရှိ အမကကျောင်း ၁၁ ကျောင်းမှ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများကို နို့တိုက်ကေ?
အိုင်ဗရီကို့စ်နောက်ခံလူ မိုကာလူးကို ဧရာဝတီ ယူနိုက်တက်အသင်း ရာသီဝက်စာချုပ်ဖြင့် ခေါ်ယူ
မွေးမြူရေးခြံ လုပ်ငန်းရှင်များ မိမိတုိ့၏ မွေးခြံများကို ဇီဝလုံခြုံမှုဖြင့် စနစ်တကျ မြှင့်တ
အလုပ်တစ်ခု လုပ်ပါက မျိုးဆက်အတွက် ကြည့်ရန် လိုအပ်ဟု နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အေ??
ရုရှား MMA ကစားသမား ခါဘစ်၏ စိန်ခေါ်မှုအား အမေရိကန် လက်ဝှေ့ကျော် မေဝဲလ်သာ လက်ခံခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်?